Nzira yekuwana sei zvakanaka SEO mazano ekubatsira kuita Google kufara?
Saka, tava kuzotarisa izvo-zvinokwanisika kubhadhara kambani yakanaka, full-stack agency, kana mumwe munhu wese anopa mazano ekubvunzurudza eSeO nokuda kwechimwe chinangwa - Ndinoda kuita kuti Google ifare pashure pezvose. Hongu, ini ndangobva kubvunzwa mubvunzo wakadaro. Uye yakaiswa nenzira isina kujairika, ndinofanira kubvuma shure kwezvose. Uye hongu, ini ndiri wakakomba pano, hapana kuseka. Mubvunzo iwoyo unoshamisa unonzwisisa, unowanzoregererwa neshumba yevane webmasters ivavo kana vadzidzisi vepawebsite vanozvitsvakira zvisingatarisirwi mukudiwa kwakanyanya kwekusimudzira vamwe. Vanowanzobuda kune imwe yakakodzera yekugadzirisa expertis chete nokuda kwekugadzirisa nokukurumidza kwepasi yavo yepamusoro muzvese yemigumisiro yekutsvaga. Zvishoma vanozvitenda nenzira iyo. Kudzokera kumubvunzo wokutanga pamusoro pezvakanaka SEO mazano ekubvunzurudza anotarisirwa nomunhu wacho kuvandudza uye kuvandudza mapeji ewebhu, kuitira kuti Google afare. Nonsense? Nhambe? Hapana chazviri! Chikumbiro chisingazivikanwi chakave chakanakisisa, zvishoma kwatiri kuti tive nezvinhu zvose maererano nekutsvaga kwekutsvaga kunyanya kunzwisisika.
Kugadzirisa kukanganisa. Kuzviitira vanhu kana makina?
Nhema ndeyokuti kutsigira mapeji ako nehutano hwakanaka kubva kumabasa akanaka ekubvunzurudzwa kweSeO kunoreva kuita kuti webhusaiti yako ive yakakosha uye ishandise-user. Kubva kune rumwe rutivi, zvakadaro, pfungwa iyi neimwe nzira inowanzoregererwa nevanhu vazhinji. Uyezve, pane dzimwe nguva vanoenda kusvika pakuisa pfungwa dzisinganzwisisiki pane teknolojia ye SEO pane zvimwe chete, saka vane mapeji avo ekuverenga magetsi nemufaro. Zvisinei, ini handizivi pamusoro pazvo. Saka, tichifunga nezveSeO consulting services, pane kuenzanisira kwakanaka pakati pehupenyu hwehupenyu hwehupenyu, uye "kuita Google kufara. "Asi isu tingawana sei zvinhu zvose panguva imwe? Ngatitii tifungidzire kuve-kushandiswa kwekusarudza kodzero yekutsvaga kutsvakurudza kwewebsite yako. Kana ari mukana wakanaka wekushandisa, zvose pamusoro pazvo zvinonzwisisika. Asi mibvunzo ipi yatinofanira kukumbira kubhadhara vanhu vakarurama vanogona kuita kuti injini yekutsvaga ifare panguva imwe? Ngatiedzei tione kuti zvinogona sei kuitika.
Isa zvigaro zvakanaka pamberi pe SEO
Fungidzira uri kugara pasi nevashandi vako vose, pamwe chete naWeyo CEO kana nhengo dzeboka reboka, kana ani zvake ari kushanda naye. Rudyi? Zvino ngatiedze kugadzirisa chinangwa chekutanga chaunoda kuwana nehutano hwekuona SEO. Usati watanga, ungadirei ikozvino kuti uwane Search Engine Optimization yeprojekti yako yemazuva ano? Sei iwe uchida kuongororwa chete nhengo yeSERPs yeinonyanya kukoshesa asi pasi pekukwikwidzana kwemashoko emashoko chete? Iwe uchaita sei musiyano pakati pekubudirira kwechokwadi kana kukundikana kwako kwakakwana? Kuita saizvozvo, uye ndisingafungi semarenie, ndinotaura kushandisa chirongwa chakajeka - ngatiedze kuongorora dzimwe vavariro dzakanaka dzekuisa pachena pamberi peSeO mazano ekubvunzurudza, pamusoro pezvinowanzovhiringidza zvinangwa dilettantes zvinoshungurudza nguva yose.
Ndinoda kutenga mamwe magwagwa kubva kune avo vanhu, vanofarira zvandinotaura. Ndine chokwadi kuti vari kutsvaga. Uye ini ndinoda kuti webhusaiti yangu iendeswe kune vanhu vakawanda uye vanofunga nezvazvo. Ndicho chikonzero ini ndinoda migwagwa yakakura kuti ndipinde pamberi pevateereri kamwechete kwenguva dzose;
Ndiri kuita zvandinokwanisa kuti ndikudze mari yekambani. Titi redu iri kuedza kubudirira nekuwedzera kutengesa kutsva. Tinotenda kuti SEO mazano ekubvunzurudza isimba guru rekugadzirisa kushambadzira kwedu;
Tiri kutsvaga vashoma vemakambani. Iye zvino boka redu riri kushanda zvakanyanya pane kuparidzirwa kukuru kune miedzo yepachena, kusainika, uye kusunungura kwakasununguka;
Tinofanira kuvaka chiremera chezita chechirongwa chekambani yedu. Uye isu tine mhinduro dzakawanda dzakanaka, asi tichiri kuisa pasi pasi pevamwe vanorwara kana kuti vasina kunaka. Tinoda kusundira manzwiro akanaka, uye zvichida kubvisa zvakaipa zvachose. Sezvatinoziva vanhu vazhinji vanofarira zita redu kana mazita emiti.
Ndiri kutsvaga motokari, huru yemotokari, kunyange magetsi makuru. Ndinozvida zvachose mari, nokuti munhu wose anoda, uye Google ichazvifarira zvakare. Izvozvo zvingava chikanganiso chakaipa, chinangwa chisina maturo chaicho. Mushure mezvose, iwe zviri nani utaure kuti une mamwe matanho emigwagwa yekutsvaga. Kana iwe nzeve uchitarisira kutendeuka kwakanaka kuendesa mari yekambani, kana chimwe chinhu chakadaro - zvakanaka kwauri. Zvakanaka, izvo zvichaita;
Uri kufunga nezvekutsvaga kwekutsvaga kutemerwa pachako. Iwe haufaniri kuisa paurongwa hwezvinangwa zvako, zvakanyanya kuti uve nechokure kubva kune chakanaka "chinangwa" pamusoro. Kazhinji, iri chiratidzo chakaipa chekuona mazano eSeO. Kazhinji kazhinji, mutapi akadaro anofanira kunge ari boka remabhizimisi. Ndinoreva kuti zvinonyanya kuitika kuti iwe unogona kuona nekukurumidza, asi huchiri kukurumidza kukurudzirwa mukunyoresa kuburikidza nedzimwe nzira dzinotyisa, dzinoita zvekunyengera kana, mwari asingabvumirwi, Black Hat SEO kazhinji anouya nekupa kwakashata kwakadaro;
Kambani yenyu inoita seyakabatanidzwa mumakwikwi makuru emakemikari. Uye pane mumwe muvengi anonyanya kushandiswa kwezwi rinoshandiswa kutaura iwe unoda kubvisa pane zvose zvinodhura. Iwe unofanirwa kuzvitaura sechinangwa chekambani, iwe uri kufamba nenzira isina kururama zvakare. Unofanira kukanganwa nezvezvinhu zvisina maturo zvakadaro. Ingozvizvibvunze - zvinogona kukuendesa iwe zvakananga kune zvimwe zvinokonzera mari, kana zvishoma zvakananga kune chero chinangwa chehurongwa? Kana iwe uchizeza, kunyange kwekanguva, iyo haisi vavariro yakanaka;
ndianiko. Nguva yekuongorora
Zvakanaka, tichaenda muchikamu chechipiri che "mamiriro edu ezvinyorwa," sezvinowanzoitwa mazwi ane uchive uye kutaura kukuru-kunzwika kwevashandi vanonyadzisa havakwanisi kuita nekodzero dzekuona SEO mazano. Ngatitangei kuenda kumagumo edu nekuita sarudzo - kana kutarisana nevanhu ivavo kana kusiya imba yemusangano muchiitiko chechinyorwa. Pashure pezvose, ndinotenda mhando shoma iri pasi apa inogona kushandiswa nyore.
Itai kuti ikozvino kuongororwa pamataurirwo enyu, ndinoreva kuti munogona kuwana nyore nyore kuziva nezvekutsvaga kwavo kutsvaga kunzwisisa kwekambani uye nzira yeSeO. Vanyengeri havazowani mukana, pamwe nehurumende dzisina kutendeseka, kana vapi vese vasina chekuita nevanotarisira SEO mazano ekubvunzurudza. Iva noutano uye uite kuti vadedere nokubvunza zvinyorwa zvekare, chimwe chinhu chakadai "Hey, ndangoda kuziva kuti Google inotarisana sei nemigumisiro yekutsvaga, uye chii chaunogona kugadzirisa iwo kwandiri?". Kukurukurirana kunofanira kuramba ichiyerera zvakanaka, pasina chikonzero chekukanganisika kuduku, izvo zvakanaka. Zvose zvaunoda kunzwa ndeye chete mhinduro yakarurama, yakadai se "Hongu, yakangoenda kuGoogle, iyi ndiyo iyo inoita zvinhu. Uye pano ndiyo nzira iyo nyanzvi dzedu dzinoziva tambo, uye pano ndiwo maitiro eboka redu rinoshandiswa kuita basa, uye pano ndizvo zvatinokwanisa kutarisira munguva refu ". Wakaona nzira inofanana yekukurukurirana kwechokwadi? Zvino iwe wakasununguka kuongorora kubvuma kwavo kuita zvose zvaunoda kutsvaga, kunyange pasina kufunga kwechipiri Source .